Hoggaamiye Jihaadi Ah Oo Madaxiisa La Dul-dhigay Lacag 10 Milyan Ah Oo Muddo Ku Noolaa Meel Ku Dhow Saldhig Ciidanka Maraykanku Deggenaayeen [WARBIXIN] - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » Hoggaamiye Jihaadi Ah Oo Madaxiisa La Dul-dhigay Lacag 10 Milyan Ah Oo Muddo Ku Noolaa Meel Ku Dhow Saldhig Ciidanka Maraykanku Deggenaayeen [WARBIXIN]
Hoggaamiye Jihaadi Ah Oo Madaxiisa La Dul-dhigay Lacag 10 Milyan Ah Oo Muddo Ku Noolaa Meel Ku Dhow Saldhig Ciidanka Maraykanku Deggenaayeen [WARBIXIN]
Buug ay qortay haweeney wariye ah oo u dhalatay wadanka Holland ayaa sheegaya in Sheekh Mullah Cumar oo ahaa Amiirkii Xarakada Jihaadiga Taliban uu deggenaa meel ku dhow saldhigga ciidama Marekanka ee gobolka Zabul wadanka Afghanistan arrinkaas oo fadeexad ku noqday isbaheysiga NATO.
Haweeneydan saxafiyadda ah oo lagu magacaabo Bette Dam ayaa sheegtay in 5 sano oo ay raadinaysay xogtaan ay wareysi la yeelatay xubno katirsan Taliban oo uu kamid yahay ilaaliyahii gaarka ahaa ee Mullah Cummar, dhinaca kale Afhayeenka Taliban ayaa xaqiijiyay soona bandhigay sawirrada gurigii uu deganaa Sheekh Mulla Cumae oo ahaa amiirka Taliban.
Sanadii 2001 markii uu mareykanku ku duulay Afghanistan ayuu si aad u ah baacsan jiray qof walba oo ay ku tuhmaan inuu ka tirsanyahay Taliban, xubna badan oo ka tirsanaa Taliban iyo kuwa shacab ah ayuu mareykanku u taxaabay xabsiyo qarsoon oo ku yaala Afghanistan loona sii gudbiyay xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Guantanama Bay.
Mareykanku si aan kala sooc laheyn uu ugummaadayay shacabka Afghanistan wuxuuna aad u raadin jiray madaxda Taliban si uu mar uun uhelo wax muujinaya in uu ka guuleystay Hoggaamiyaashii Jihaadiga ee xilligaan.
Sidoo kale CIA-du waxay raaf adag ka geysatay Bakistan oo ay aaminsanayeen in saraakishii Taliban iyo Al-Qaacida ay u gudbeen mana u suurtoobin in ay gacanta ku dhigaan Mullah Cumar iyo dhamaan saraakishii sarsare ee Taliban iyo Al Qacidda marka laga reebo hoggaamiyaal aan badneyn oo gacanta lagu dhigay kuwaasina ma aheyn kuwa uu ku qanciyay G.W.Bush-kii xilligaas madaxweynaha ka ahaa Washington.
Iyadoo sarakiisha Mareykanku ay ku celcelinayeen in Mullah Cumar uu ku suganaa Pakistan ugu dambeyna uu halkaas ku dhintay ayey dhinaca kale Taliban ku celcelisay in Mullah Cumar uu san meelna uga dhaqaaqin Afghanistan. Xogta ku qoran buugaan ayaa fadeexad ba’an ku ah hay’adaha sirdoon waxa loogu yeero NATO gaar ahaan CIA-da Mareykanka.
Mullah Cumar oo ay madaxiisa saarneyd lacag dhan 10 Milyan oo dollar ayaa la sheegayaa in uu deganaa guri sadex mile u jira saldhigga ciidamada Mareykanka ee fadhigiisu yahay gobolka Zaabul oo ah gobolka uu kasoo jeedo Mullah cumar, buugga ayaa sidoo kale tilmaamaya in hogaamiyihii hore Taliban uu u nolaa sida wadaad taqi ah oo halkaas isaga cibaadeysta.
Saraakiisha ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ku sugan iyo Jeneraallo hore oo American ah ayaa dhammaantood arrintan ku tilmaamay wax aad looga naxo iyagoo ku baaqay in baaritaanno lagu sameeyo macluumaadyada ay soo gudbisay haweenaydan saxafidda ah oo sida la sheegay in ay leedahay sumcad dhanka saxaafadda ah.
Ergaygii hore ee Mareykanka uqaabilsanaa dalka Afghanistan ayaa isna sheegay in qisadaan oo kale mar ay usheegeen saaxiibadiisi ka howlgelayay Afghanistan balse uu rummeysan waaye wuxuuna ugu baaqay maamulka Donald Trump in uu ka shaqeeyo sidii uu soo gaba gabeyn lahaa dagaalka dabada dheeraaday ee Afghanistan.
Saraakiisha ammaanka Taliban ayaa larumeysanyahay in ay aad u adkeeyeen arrimaha sirta ah ee ku aaddan goobta uu deganaa Mulla Cumar waxaana si qarsoodi ah guriga Mulla lagu geyn jiray raashin iyo biyo.
Dad daris la ahaa guriga Hoggaamiye Cumar waxay sheegeen in marnaba aysan rumeysan deganaashiyihiisa islamarkaana ay gurigan yar ee dhoobada ka sameysan u arkayeen mid uu deganyihiin nin faqiir ah marmarka qaarna ay ugeyn jireen raashin iyo waxyaabo kale oo sadaqa ah.
Afhayeenka Taliban Dabixullah Mujahid ayaa tilmaamay in Mullah Cumar uu dhintay xanuun la daaweyn karay kadib markii uu diiday in uu caafimaad u raadsado wadanka dibaddiisa.